Ity ny logo vaovao Pandora | Famoronana an-tserasera
Misy iray ady mafy Anisan'ireo serivisy mozika mivantana, izay ahitantsika Spotify, Apple Music, Play Music na Pandora. Niditra an'io ady io tamin'ny Amazon Unlimited Music aza i Amazon.
Raha te hiavaka amin'ireo olona goavambe ireo ianao dia tsy maintsy mitady ny hevitra mety rehetra ary iray amin'izany ny mandefa sary vaovao izay manampy ny freshness sy ny sary vaovao an'io logo malaza taloha io. Pandora no efa nataony ary nanolotra ny momba ny sary famantarana vaovao.
Nanapa-kevitra ny handefa sary famantarana vaovao i Pandora ary hisolo tena azy inona no atolotry ny serivisinao ho an'ireo mpampiasa te hanana mozika tsara indrindra. Ny sary famantarana vaovao dia maneho ny fialana amin'ireo ezaka voalohany ireo izay loko tsotra indrindra miaraka amin'ny lantom-peony serif.
Araka ny nasongadin'i Tony Calzaretta, filoha lefitry ny serivisy famoronana ao Pandora, dia maneho ny marika mavitrika ao amin'ny endrika, loko ary lamina. Ny sarin'ny GIF dia manolotra ireo famerim-bidy marobe amin'ny sary famantarana Pandora izay antenain'ireo mpampiasa ny mahita azy, manomboka amin'ireo sarobidy kokoa ka hatramin'ny tena MTV tamin'ny taona 80.
Ity famolavolana vaovao ity dia natao ho an'ny ezaky ny Pandora mampiorina ny tenany eo amin'ny tsena mitombo izay mandefa mozika an-tserasera. Miaraka amin'ny Spotify, iTunes RAdio, ary Apple Music dia mila sary maneho ny tsy fitovizan'ireo mpifaninana aminy ianao.
Ny zavatra mahaliana momba ny fampisehoana ny logo vaovao dia ny tranonkalanao mbola manana ny sary famantarana taloha. Izay manolo-kevitra fa zavatra bebe kokoa no ilaina mihoatra ny famolavolana endrika logo, fa aleo manangana fanentanana fanavaozana iray manontolo hahafahan'izy ireo misarika mpampiasa bebe kokoa. Làlana iray nalaina tamin'ny sary famantarana vaovao izay manome hevitra hafa vaovao sy manaitra kokoa.
Ity ny Euro manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ity no sary famantarana vaovao ho an'ny Pandora, serivisy fandefasana mozika